Nguva nyowani yeDelta Airlines neKorea Mhepo: Boston kuenda kuSeoul nendege kutanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nguva nyowani yeDelta Airlines neKorea Mhepo: Boston kuenda kuSeoul nendege kutanga
Airlines • nhandare yendege • Andorra Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • South Korea Kuputsa Nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mubatanidzwa mutsva wekubatana uri kuitika pakati peKorea Air neDelta Airlines iri kuitika, uye Boston ine basa guru mairi.
Iyo nyowani isingamire-yekumira-sevhisi pakati peBoston neSeoul ichavhurwa muna Kubvumbi 12, 2019 mukubatana pamwe neanobatirana mudiwa, Delta Air Lines
Iyi itsva ndege yeBoston, pamwe neMinneapolis / St. Paul-Seoul sevhisi iri kuvhurwa neDelta mu2019, ndiwo ekutanga kuwedzerwa kumubatanidzwa weSeoul-Incheon network kubva panguva iyo vatakuri vaviri vatangisa kudyidzana kwavo muna Chivabvu.
"Nokubatanidza zvirongwa zveKorea Air neDelta, vatengi vedu vanokwanisa kunakidzwa nenzira dzisingaenzaniswi dzekufamba," akadaro John Jackson, mutevedzeri wemutungamiri weKorea Air. "Kubatana kwedu hapana mubvunzo kuti ndiko kudyidzana kwakasimba uye kunopa ndege dzese mbiri kukwikwidza."
Vatengi vanogona kuwana 290 yekuenda kuDelta muAmerica uye makumi masere kuenda kuAsia paKorea Air. Muna Ndira apfuura, Korea neDelta vakabatana muindasitiri-inotungamira Incheon Terminal 80, ichiita kubatana pakati peAsia neAmerica zvimwe zveindasitiri zvinokasira.
"Semusuwo mukuru wemaindasitiri emhando yepamusoro, Boston ndiyo inonyanya kufarirwa isina kuchengetedzwa kubva kuKorea ine kudiwa kuri kukura nekukurumidza kuenda kuAsia," akadaro Jackson weKorea Air. "Guta, pamwe nemayunivhesiti uye makoreji, riri kuwedzera New England hub inokwezva makambani mumaindasitiri ari kukurumidza seIT, bio-technology, hutano, mari uye mishonga."
Korea Air neDelta varikuisa mari muBoston, uye iyi ndege nyowani kuenda kuSeoul inowedzera kiyi yekubatanidza iyo vadyidzani veJV vanopa vatengi veBoston-nharaunda. Beyond Seoul, vafambi vanokwanisa kusvika ingangoita ese Asia paKorea Mhepo ine yakasarudzika yevatengi ruzivo kuIncheon's Terminal 2 ine hukama hwakanaka uye husina musono uye ina yakashongedzwa yeKorea Air lounges, pamwe nemamwe magaro akakumikidzwa kuendesa vafambi mumakamuri ese ane ekuwedzera mashawa nenzvimbo dzekurara. .
Basa reBoston-Seoul richavhurwa nendege nyowani yeKorea Air 787-9 Dreamliner ine matanhatu ekutanga akarara masutu, 18 Prestige bhizinesi kirasi yekurara masutu, uye zvigaro makumi maviri nezvina makumi maviri nezvishanu mukirasi yehupfumi.
Yekutanga Kirasi inoratidzira kudya kwepurazi-kuenda-kubhururuka nechikafu chakasimwa papurazi yendege pachayo paJeju Island, 23-inch yepamusoro-resolution yekutarisa, yakasarudzika duvet uye yekuwaridza, mu-ndege yekunyaradza mbatya naGianfranco Ferre, uye DAVI-yakashongedzwa amenity kits nezvinhu zvishanu zvakasiyana zvekushongedza zvigadzirwa. Chekutanga kirasi vatengi zvakare vanogona kunakidzwa neakasarudzika mabhenefiti eakazvitsaurira cheki-mune lounge uye Yekutanga Kirasi yekutandarira kuIncheon Airport.
Korea Air's Prestige Suites inopa zvakavanzika 21-inch yakafara flatbed zvigaro zvakapatsanurwa makumi manomwe nemashanu masendimita kure nekunanga nzira yekuwana. Pabhodhi, Vakakurumbira vatengi vanonakidzwa neKorea Air's mubairo-wining chikafu uye waini chirongwa uye yekutanga DAVI amenity kit.
Zvichakadaro, Koreya yemhepo hupfumi kirasi iri pakati peiyo indasitiri yakasununguka, iine 33-34 inches pakati pezvigaro, 10.6-inch yepamusoro-resolution yemunhu yekutarisa uye dzakasiyana nzira dzekudya.
Nekutanga kweBoston neMinneapolis / St. Paul, Korean Air uye Delta ichapa dzinosvika makumi maviri nesere nendege pazuva pakati pemasuo gumi nemana muUS neAsia. Kubva kuKorea chete, vanobatana pamwe chete vachapa nendege dzinopfuura zana neshanu nendege kuenda kunzvimbo gumi nenhatu dzekuUS, kuwedzera kweanopfuura gumi muzana kubva zhizha 29. Nokubatanidza zvirongwa zviviri zveairlines, vatengi vane nzira dzisingaenzaniswi dzekufamba vachinakidzwa nekudzokororwa kazhinji kubatsirwa.
Shedhiyo rondedzero yeiyi nyowani sevhisi iri pazasi, nekuchengetedzwa kuvhura gare gare rino zhizha.
Korea Air's itsva isingamire sevhisi pakati peBoston neSeoul:
Seoul 4:50 pm (zuva rinotevera)
Chipiri, Chitatu, Chishanu, Mugovera, Svondo
Inotanga Kubvumbi 12, 2019
Kuenderera mberi kwekudyara kweDelta muBoston kunosvika 112 kukwira kwezuva kusimuka muzhizha 2018, kuwedzera kwekubva gumi neshanu zvichienzaniswa nezhizha 19 uye 2017 kuenda pamusoro kwezhizha 29. Delta nevamwe vayo vachashanda 2016 nzvimbo dzese kubva kuBoston, kusanganisira gumi nematanhatu nzvimbo dzekunze. Chiziviso chanhasi cheSeoul sevhisi paKorea Mhepo inounza isingamire kufukidzwa kwenzvimbo huru imwe neimwe yekufamba kwenyika. Delta yakazvipira kusimudzira ruzivo rwevatengi muBoston, uye inopa zvigaro zvekutanga zvekirasi kupfuura chero mumwe mutakuri nekirasi yekutanga pane imwe nendege kubva munaJune. Delta Sky Club inoshandisa nzvimbo mbiri muTerminal A, ichipa vatengi sarudzo dzakasiyana siyana dzine hutano uye nyowani uye sarudzo dzinoverengeka dzekumwa svutugadzike kusanganisira yemuno Samuel Adams yekumwa doro uye kofi yeStarbucks. Delta inopa yakazara zvigaro-pamubhedha zvigaro muDelta One pane dzendege dzese dzinoenda kuEurope, sarudza ndege dzinoenda kuLos Angeles uye pane dzese nendege kuenda kuBoston yeNhamba 52 yekumba yekuenda, San Francisco.
Nezve iyo Korean Air uye Delta Joint Venture
Iine 27 yepamusoro-yezuva nendege pakati peUS neAsia, mubatanidzwa wekudyidzana pakati peDelta neKorea Air unopa vatengi epasirose-kirasi mafambiro ebhenefiti kune imwe yeakanyanya nzwisisika nzira network mumusika weTrans-Pacific. Vabatsiri vacho munguva pfupi yapfuura vakawedzera codeshare kubhururuka uye kutanga kwegore rino vakagamuchira mvumo yehurumende kune trans-Pacific mubatanidzwa uyo unosimudzira kubatana pakati peUS neAsia ichipa vatengi sarudzo yakawanda yekufamba isina musono. Ndege dzese dziri mbiri dzakavandudzawo mapurogiramu ekuvimbika 'anobatsira, kusanganisira kugona kuwana mamaira akawanda pazvirongwa zvese uye nekudzikunura padandemutande rakawedzerwa.